Tsipika famokarana zezika biolojika kely. - YiZheng Heavy Machines Co., Ltd.
Ny tsipika famokarana zezika biolojika kely dia manome anao torolàlana momba ny teknolojia famokarana zezika, teknolojia ary fametrahana.
Ho an'ireo mpampiasa vola na mpamboly zezika, raha tsy manana fampahalalana kely momba ny famokarana zezika organika ianao ary tsy misy loharanom-pahalalana ho an'ny mpanjifa, dia afaka manomboka amin'ny tsipika famokarana zezika voajanahary kely ianao.
Misy akora azo ampiasaina amin'ny famokarana zezika biolojika
1. Mixer-axis roa
Ny mixer-axis roa dia mampiasa fitaovana vita amin'ny vovoka toy ny lavenona maina ary afangaro amin'ny rano mba hamandoana ara-dalàna ny vovoka lavenona maina, mba tsy hiakatra lavenona maina ilay zavatra mando ary tsy hanaparitaka ny vongan-drano, mba hanamorana ny fitaterana famoahana lavenona lena na famindrana amina fitaovana fampitaovana hafa.
2. Granulator zezika biolojika vaovao
Ny granulator zezika biolojika vaovao dia ampiasaina amin'ny famoahana ny tain'akoho, zezika kisoa, tain'omby, karbonika mainty, tanimanga, kaolin ary poti hafa. Ny votoatin'ny biolojika amin'ny potika zezika dia mety hahatratra 100%. Ny haben'ny sombiny sy ny fitoviana dia azo ahitsy arakaraka ny hafainganam-pandeha.
Ny tahan'ny granulation
Size LW - avo (mm)
3. Roller fanamainana
Ny fanamainana roller dia ampiasaina hanamaina ireo sombina zezika namboarina. Ny takelaka fampiakarana anatiny dia manainga sy manipy ny poti-koronosy hatrany, mba hifandraisana tanteraka amin'ny rivotra mafana ilay fitaovana hahazoana ny tanjon'ny fanamainana fanamiana.
Haingam-pandeha (r / min)
Roller cooler dia masinina lehibe iray izay mampangatsiaka sy mampihena ny potiky ny zezika vita amin'ny bobongolo aorian'ny fanamainana. Raha mampihena ny maripanan'ny potika zezika voavolavola, mihena ihany koa ny atin'ny rano. Masinina lehibe izy io hampitomboana ny tanjaky ny zezika zezika voavolavola.
5. Grinder grama vita amin'ny serizy
Ny crusher rojo mitsangana dia mandray rojom-karida mahery tsy mahazaka amadium miaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny fotoana famolavolana, izay mety amin'ny fikolokoloana ny akora famokarana zezika sy ny refuels.
Ny haben'ny sombin-tsakafo farany (mm)
Taorian'ny fanorotoroana haben'ny sombin-javatra (mm)
Herin'ny motera （kw）
6. Fanasiana roller
Ny sivana amin'ny milina sivana dia ampiasaina hanasarahana ireo poti-zezika mahazatra sy ireo zezika zezika tsy manara-penitra.
7. Masinina fonosana mandeha ho azy
Mampiasà milina famonosana zezika mandeha ho azy mba hamonosana ireo zezika zezika organika manodidina ny 2 ka hatramin'ny 50 kilao isan-kitapo.
Fanjifana loharano amin'ny rivotra （m3 / h）
Fanerena ny loharano Air MPa pressure
Kitapo / metatra famonosana